အေးစက်သွားသော ကော်ဖီ တစ်ခွက်… | Sanchaung Journal
အေးစက်သွားသော ကော်ဖီ တစ်ခွက်…
March 5, 2009 freebird	2 Comments
တံခါးဝတွင် ချိတ်ထားသော ဧည့်ကြို ခေါင်းလောင်းလေး မြည်လာပြန်သည်။ သားသားနားနား ၀တ်ဆင်ထားသော အသက်(၃၀)ခန့် လူရွယ်တစ်ဦး ကော်ဖီနံ့ သင်းပျံ့နေသော ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်လာသည်။
ဆိုင်ရှင်က တရင်းတနှီး ကြိုဆိုလိုက်သည်ကို ခေါင်းညိတ်ပြုံးပြရင်း ဘားကောင်တာ ရှေ့တွင် သူဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
“ကျေးဇူးပြုပြီး ကာပူချီနို တစ်ခွက်လောက် ပေးပါ”
သူမပြန်ဖြေရင်း ကော်ဖီစေ့များကို ကြိတ်ပြီး ကျိုလိုက်သည်။ သူမကော်ဖီကျိုနေပုံမှာ သူ့အတွက် လှပသော ပုံရိပ်များ လှုပ်ရှားနေသည့်အလား ပြုံးပြုံးလေး ထိုင်ကြည့်နေမိသည်။
သူမ လာချပေးသည့် မွေးကြိုင်နေသော ကော်ဖီကို သူတစ်ငုံ့သောက်လိုက်သည်။
“ဒါ ပထမဆုံး အကြိမ်လားရှင်”
“ကျွန်မတို့ဆိုင် အပြင်အဆင် ဘယ်လိုနေလဲ”
“မဆိုးပါဘူး ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်” ဆိုင်ထဲကို တစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်ရင်း သူပြန်ဖြေလိုက်သည်။
“ကျွန်မလည်း ဒီကော်ဖီဆိုင်ကို အရမ်း သံယောဇဉ်ဖြစ်မိတယ်။ စီးပွားရေး မကောင်းပေမဲ့ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအမျိုးသားက ဆိုင်ကို မပိတ်လိုက်ချင်ဘူးလေ”
“အင်း” သူခေါင်းညိတ်ပြရင်း ကော်ဖီကို သောက်လိုက်ပြန်သည်။ ဆိုင်ထဲတွင် သီချင်းသံ တိုးတိုးလေး လွှင့်ပျံ့ နေသည်ကလွဲလို့ ခဏတာ တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
“အင်း… ကျွန်တော် တစ်ခုလောက် မေးချင်တယ် ရမလား”
တိတ်ဆိတ်မှုကို သူစတင် ဖြိုခွဲလိုက်သည်။
“ဘာမေးခွန်းများလဲ” သူမ တအံ့တသြ မေးလိုက်သည်။
“ဟို… ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာ” သူခေါင်းကုတ်ရင်း စကားဆက်လိုက်သည်။
“ကျွန်တော်ပြောမဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို အရင်နားထောင်ပေးပါလား”
“ကျွန်တော်မှာ ချစ်သူတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ လက်ထပ်ဖို့အထိ ရည်ရွယ်ပြီး ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်ခရီးလမ်းဟာ အတားအဆီးမရှိ၊ ပြဿနာမရှိ ဖြောင့်ဖြူးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့….”
“ဒါပေမဲ့.. ဘာဖြစ်လဲ” သူမ သိချင်ဇောနှင့် အလောတကြီး မေးလိုက်မိသည်။
“ဟင်း…” သက်ပြင်းရှည်တစ်ချက်ချရင်း သူ့မျက်နှာ ညှိုးကျသွားသည်။
“ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့နောက်မှာ တစ်ခါတရံ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အရာတွေ ပုန်းအောင်းနေတတ်သေးတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော် စေ့စပ်ဖို့ တစ်လအလို တစ်ညမှာ… သူ… သူ.. မတရား အနိုင်ကျင့် ခံလိုက်ရတယ်”
သူမ ထိတ်လန့်စွာ အော်လိုက်မိသည်။
“ကျွန်တော် မကောင်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီညက သူ့ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ခဲ့ရင် ဒီလိုဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး”
စားပွဲကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် သူ ရိုက်လိုက်မိသည်။ ရိုက်အားကြောင့် ဖန်ခွက်ထဲက ကော်ဖီပင် လှုပ်ခါသွားသည်။
“ကျွန်မကိုမေးမယ့် မေးခွန်းက အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်နေလို့လား”
ဖိတ်စင်ကျသွားသော ကော်ဖီကို သုတ်ရင်း သူမ မေးလိုက်သည်။
“မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့အပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်က အဲဒီကိစ္စကြောင့် မပြောင်းလဲသွားဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်အတိုင်း စေ့စပ်ပွဲကို ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စေ့စပ်ဖို့ တစ်ရက်အလိုမှာ သူအိမ်က ထွက်ပြေးပြန်တယ်” တည်ငြိမ်မှုအပြည့်နှင့် သူပြောနေသော်လည်း သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် စိတ်မကောင်းခြင်း များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။
“ဘာဖြစ်လို့ ထွက်ပြေးတာလဲ” စိတ်လှုပ်ရှားစွာ သူမ မေးလိုက်ပြန်သည်။
“သူရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ မထိုက်တန်လို့တဲ့။ ထွက်ပြေးတဲ့ လမ်းမှာ ကံဆိုးချင်တော့ ကားတစ်စီးနဲ့ ၀င်တိုက်ပြီး သူဆေးရုံရောက်သွားခဲ့တယ်။ သူသတိရလာတော့ ကျွန်တော်ဆေးရုံကို သွားခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မိဘတွေက တွေ့ခွင့် မပေးခဲ့ဘူး”
“သူ့ကို မတွေ့ဖို့ သူ့မိဘတွေ ကျွန်တော်ကို တောင်းပန်မှ ကားတိုက်မိလို့ သူအတိတ်မေ့သွားမှန်း ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့မိဘတွေက ဒါဟာ သူ့အတွက် မကောင်းတဲ့ အတိတ်တွေကို မေ့ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်၊ သူ့အတွက် ဘ၀အသစ်တစ်ဖန် ပြန်စဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ပေးမတွေ့ခဲ့ဘူး”
“သူ့မိဘတွေ ပြောတာလည်း မှန်နေတာပဲ။ သူ့ရောဂါ တည်ငြိမ်မှုရမှ သွားရှာလိုက်ပေါ့”
“အဲဒီ အခြေအနေရောက်ဖို့အတွက် အချိန်ဘယ်လောက် ပေးရမလဲ… (၁၀)နှစ်လား.. (၁၀)နှစ်ဆိုရင်လည်း သူမရှိတဲ့ဘ၀နဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်မှိတ်ခံစားပြီး စောင့်နေမှာပါ။ တစ်ခါတလေ လမ်းမှာတွေ့ကြရင်တောင် သူစိမ်းတွေလို ဟန်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ခံစားရမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပါဦးလားဗျာ” သူပြောရင်း အသံ သိမ်ဝင်သွားသည်။
“ရင်ကွဲမတတ် ခံစားနေရလည်း ရှင် ဒီလမ်းကိုပဲ ရွေးခဲ့တယ် မဟုတ်လား” သူမ ကိုယ်ချင်းစာစွာ ပြောလိုက်သည်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို (၁၀)နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီလေ” သူခေါင်းညိတ်ရင်း ပြန်ဖြေသည်။
“ဟုတ်လား… ၀မ်းသာစရာပေါ့။ (၁၀)နှစ်လုံးလုံး ခံစားခဲ့ရတာ ဒီနေ့သူ့ကို သွားတွေ့လို့ ရပြီပေါ့နော်”
“မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့တွေ့ရမယ့်ရက်ကို ကျွန်တော်ကြောက်နေမိတယ်။ (၁၀)နှစ်အတွင်းမှာ သူ့ကို ချစ်တဲ့စိတ်က မပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် သူ့ဘက်ကရော.. တကယ်လို့ အရင်က ချစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ သူ့ကို ပြောပြလည်း သူက သတိမရခဲ့ဘူးဆိုရင်… ဒါမှမဟုတ် သူ့မှာချစ်သူရှိနေပြီ၊ သူအိမ်ထောင်ကျနေပြီဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ.. ကျွန်တော်မေးချင်တာက ဒီမေးခွန်းပါပဲ”
သူစိတ်လှုပ်ရှားစွာ သူမ၏ အဖြေကို စောင့်နေမိသည်။
“အင်း.. ကျွန်မထင်တယ်လေ။ ရှင်သာသူ့ကို တစ်ကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ရှင့်ကိုသူမှတ်မိ၊ မမှတ်မိချင်နေပါစေ။ သူ့ကို နောက်တစ်ကြိမ် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီး ဘ၀ကို အသစ်တဖန် ပြန်စလိုက်လည်း မဆိုးပါဘူး။ သူ့မှာ ရည်းစားရှိနေပြီဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိဘူးလေ.. ကြိုးစားကြည့်လို့ ရသေးတယ် မဟုတ်လား” သူမ အားတက်တရော ပြောနေသည်။
“ဒါပေမဲ့.. ” သူမ စိတ်မကောင်းစွာ စကားဆက်ပြန်သည်။
“သူ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင်တော့ လက်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်မတို့လို အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်အိမ်ထောင်ကို ဖျက်တဲ့လူတွေကို အရမ်းမုန်းတတ်တယ်လေ”
“ဟုတ်လား” သူခေါင်းငုံ့ပြီး အေးစက်စက် မေးလိုက်မိသည်။
“ဟုတ်တယ်.. ဒါကြောင့် ရှင်ဘယ်တော့မှ သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ဖျက်တဲ့လူ မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်”
ကျောင်းသားတစ်စု ၀င်လာသည်။ ကျောင်းသားများကို သူမ သွားဧည့်ခံလိုက်သည်။
သူမ တစ်ခုခုကို သတိရလိုက်သလို ချက်ချင်း သူ့ဖက်လှည့်ပြီး မေးလိုက်သည်။
“ရှင်ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မကို ဒီမေးခွန်း မေးတာလဲ… ရှင်နဲ့ကျွန်မက ဒီနေ့မှ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဖူးကြတာ မဟုတ်လား”
“အင်း….. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ထပ်ပြီးရင် ဒီလို ကော်ဖီဆိုင်လေး ဖွင့်ချင်တယ်လို့ အရင်က သူပြောခဲ့ဖူးလို့ပါ”
“ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါကြောင့်ပါပဲ…. ဒါကြောင့်ပါပဲ…. ဒါ….”
ထိုစကားကိုပဲ ထပ်တစ်လဲလဲ သူရေရွတ်နေမိသည်။
ဆိုင်ထဲက သီချင်းသံ တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။ တစ်ဖက်စားပွဲမှ ကျောင်းသားများ၏ ဆူညံရယ်မောသံက ဆိုင်တစ်ခုလုံး လွှမ်းမိုးသွားသည်။ သူခေါင်းငုံ့ရင်း သူမ၏ ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်တွင် ၀တ်ဆင်ထားသော လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ခိုးကြည့်လိုက်မိသည်။ သူ့ပါးပြင်ထက်မှ စီးဆင်းလာသည့် နွေးထွေးသော မျက်ရည်တစ်စက်က အေးစက်နေပြီဖြစ်သော ကော်ဖီခွက်ထဲသို့ လျှောကျသွားလေတော့သည်။
email ဖြင့်မျှဝေပေးသော ခေတ္တာ ကိုကျေးဇူးတင်လျှက်။
source : http://nineninesanay.blogspot.com/2007/11/blog-post_23.html
source ကို ထောက်ပြပေးသော Tomorrow.trek@gmail ကို ကျေးဇူးတင်လျှက်။
မအားလပ်လို့ နောက်ကျမှ update လုပ်ရတဲ့အတွက် နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
Previous Postအလုပ်လုပ်ရက်-ဘယ်နှရက်Next Postဗီဒီယို ကဏ္ဍ
2 thoughts on “အေးစက်သွားသော ကော်ဖီ တစ်ခွက်…”
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ၊ ကောင်မလေးကသူ့ အရင်ကကောင်မလေးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်နော်။
မိုက်တယ်ဗျာ။ ဖတ်ရတာ တန်သွားပြီး။ ကျေးဇူးအထူး ။
It should tag as ‘နိုင်းနိုင်းစနေ’.
This is her original post here:
Thanks in advance for your correction.